ရေမြောင်း၊ ပလက်ဖောင်းနှင့် လမ်းများပေါ်၌ ကျူးကျော်သူများကို စီမံချက်ဖြင့် ရှင်းလင်း၊ ထပ်မ?? - Yangon Media Group
ရေမြောင်း၊ ပလက်ဖောင်းနှင့် လမ်းများပေါ်၌ ကျူးကျော်သူများကို စီမံချက်ဖြင့် ရှင်းလင်း၊ ထပ်မ??
မန္တလေး၊ ဇန်နဝါရီ ၂၉
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးမြို့ပေါ် ခြောက်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ရေမြောင်းများ၊ ပလက်ဖောင်းများနှင့်လမ်းများပေါ်တွင် ကျူးကျော်၍ ဈေးဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားမှုကို စီမံချက်ဖြင့် ရှင်းလင်းဖယ်ရှားနေပြီး ထပ်မံကျူး ကျော်သူများကို တရားရုံးတွင် အမှုရင်ဆိုင်ရသည်အထိ အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့ တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီထံမှ သိရသည်။
”မြောင်းတွေ၊ ပလက်ဖောင်း တွေနဲ့လမ်းတွေဟာ လျှောက်လမ်းကျဉ်းရတဲ့အထဲ လောဘဇောတိုက်ပြီး ကျူးနေကြလို့ ပထမအကြိမ် ကျူးရှင်းလင်းရေးစီမံချက်လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမြို့ကတော် တော်လေးသန့်ရှင်းသွားပါတယ်။ လမ်းကျူးရှင်းလင်းရေးစီမံချက် ရုံးပိတ်ရက်မရှိ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ အခုဒုတိယအ ကြိမ်ရှင်းလင်းရေးက နောက်ဆုံးအကြိမ်ပါ။ ထပ်မံကျူးရင်တော့ တရားရုံးအထိ အမှုရင်ဆိုင်ရမှာပါ”ဟု မန္တလေးမြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာရဲလွင်က ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ ကျူးကျော်ဈေးဆိုင်ဖွင့်သူများဖယ်ရှားရန်အတွက် စည်ပင်သာယာရေးရဲတပ်ဖွဲ့၊ စည်ပင်အခွန်ဌာနနှင့်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် လည်း ပုံမှန်ဆောင်ရွက်နေသည့် ကျူးကျော်ဖယ်ရှားမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
”ကျူးကြောင့် စိတ်ညစ်နေရသူတွေနဲ့ အခုမှလာရောက်ကျူးတာတွေရှိရင် တိုင်ကြားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စီမံချက်ကတစ်မြို့လုံးကို လွှမ်းခြုံမှာမို့ ဖြစ်နိုင်ရင် အလှည့်ကျသည်အထိစောင့်ပေးပါ။ ကိုယ်ပိုင်ဝင်းခြံထဲကျူးသူတွေအတွက် မကြာခင်စီမံချက်အသစ်နဲ့လာပါမယ်”ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားသည်။ လမ်းပေါ်သို့ကျူးကာ ဆိုင်ဖွင့်ကြသူများတွင် လမ်းဘေးဈေးဆိုင်လိုင်စင်များဖြင့် ဖွင့်လှစ်ရောင်း ချနေကြသူများပါဝင်မည်မဟုတ်ဘဲ အဆောက်အအုံအတည်တကျ ဖြင့် ရောင်းချနေပြီး လမ်းပေါ်အထိ ဆိုင်ကိုတိုးချဲ့သူများသာ ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးတွင် ယခုဘဏ္ဍာနှစ် အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းငါးခု အတည်ပြု ချထာ??
''ကျွန်တော့်အတွက် အိမ်ထောင်ရေး ဆိုတာကတော့ မရိုက်ဖူးတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား တစ်ခုလိုပါပဲ'' ဘုဏ်း?
ဧရာဝတီ မြစ်ကြောင်းအတွင်း တရားမဝင် ရွှေရှာသော ရွှေဖောင် ၁၅ စင်း ဖမ်းဆီးရမိ
ဆလုံကျေးရွာများကို ရပ်ရွာလူထု အခြေပြု ခရီးသွားဒေသအသစ်အဖြစ် လာမည့်နှစ်တွင် ဖော်ဆောင်မည်